Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi | Eyekhala 2022
Ukuhambelana nokuvumisa ngeenkwenkwezi kukaMegan Fox, owazalwa ngoMeyi 16, kumenza iTaurus kunye neMGK, owazalwa ngo-Epreli 22, oku kuthetha ukuba naye uyiTaurus.
Nasi isizathu sokuba uKourtney Kardashian kunye noTravis Barker's Engagement yenze ingqiqo, ngokutsho kweAstrology
I-Synastry of the Stars kunye ne-Astrologer uLauren Ash: nantsi into ethethwa nguKourtney Kardashian kunye neetshathi zeenkwenkwezi zikaTravis Barker malunga nomtsalane wabo wothando.
Nantsi into enokuxelela yona ngeenkwenkwezi malunga nobudlelwane bakho
Isixhobo sasimahla seSynastry | Vavanya unxibelelwano lothando phakathi kwakho kunye nokutyumza kwakho. Funda iziseko ze-synastry kunye nesikhokelo sethu sokuhambelana ne-zodiac.
Uyifumana njani iChiron yakho kwiAstrology (+Isibali seChiron sasimahla)
I-Chiron Calculator yasimahla: I-Chiron inokutyhila okuninzi malunga nethuku lakho, iimvakalelo kunye nobuntununtunu. Imele zombini isiqu sakho somzimba kunye nokomoya.
I-Venus Triad yakho ibhekisa kumandla adityanisiweyo e-Ascendant yakho, iVenus, kunye nokubekwa kwe-Mars kwitshathi yakho yokuzalwa. Bala iVenus Triad yakho kwaye ufunde...
Iplanethi nganye ekuvumiseni ngeenkwenkwezi ilawula indawo eyahlukileyo yobomi bethu. Funda intsingiselo emva kweeplanethi ngokuvumisa ngeenkwenkwezi, fumana ulawulo lweplanethi, kunye nokunye ngesi sikhokelo.
iinwele zeenwele ze-wavy
ilanga inyanga kunye nemiqondiso yokuphuma
ukucheba iinwele zomntu omnyama
Iingcamango ze tattoo ze-mens sleeve